Ufuna ukukhula #herbs kangcono kulo nyaka? Amy sethu imibono kakhulu
Growing amakhambi kuyinto wokuzilibazisa othandwa ngoba abapheki balimi ngokufanayo. Ngiqonde ongamthandi umbono ka behamba baphumele ku ebaleni lakho futhi evuna iyiphi imbiza udinga zokupheka yakho fresh kusuka engadini? Omunye izinto ezihamba phambili mayelana amakhambi siwukuthi bangamalungu izitshalo aphansi kakhulu yesondlo, okwenza ...
Nakuba zikhona izitshalo eziningi oluhlaza ingafeza umoya ohlanzekile, ukususa ngempumelelo indima ukungcola zasendlini, kodwa izindlu esasisanda kuyilungisa ngaphansi amakhemikhali angcolise, Aloe, Chlorophytum, Sansevieria nezinye izitshalo yilona ephumelela kunazo isiqedaphunga zemvelo. ososayensi be-NASA ngemva kweminyaka ema-R20 ...
Okuthunyelwe okuningi mayelana amakhambi ezikhulayo
umlawuli ku 18-03-05
Le imali izindleko amakhambi nikhula oregano engadini Omiswe: Isinyathelo-by-step imiyalelo Plant dill esingeziwe butterflies uvemvane ozithandayo basil izinhlobo yethu
Umanyolo for iziqukathi imbiza engadini
Amakhambi isikhule izigubhu kuzodinga Umanyolo amaningi kunalawo likhule ensimini. Lokho kungenxa yokuthi abanalo indlela ubuyise umsoco basebenzisa up njengoba zikhula. Kodwa ungakhathazeki, ungenawo ukuthenga Umanyolo fancy ngqo iziqukathi zakho, ungasebenzisa Umanyolo efanayo ...
Uma kuziwa ukulima isivande enempilo, kungcono ukusebenzisa zemvelo, manyolo organic. Ngazi ingadi organic kungaba uzwakale scary, futhi abantu bavame sifinyelele for izinto chemical ngoba kubonakala kulula. Kodwa ukusebenza nemvelo, futhi usebenzisa manyolo organic engadini akuyona impilo kuphela ...
Ikhwalithi ephezulu imbali yokuthengisa
Namuhla, Shandong Jinan erhuanxi umgwaqo Kugcwele fu lai imbali emakethe. Abantu abaningi ngisho izivakashi zathuthelekela ukhethe futhi uthenge izimbali. Nks xue nomkhaya wakhe ukuba ukhethe futhi uthenge izimbali. Ngemva "ukuhlabana", ms xue ukuthenga umcengezi imali isitshalo, ezimbili umcengezi butterfly orchid, azalea eziyisithupha 10. Sh ...
Indlela ukuchitha e amabhodwe imbali? Izinyathelo kule amabhodwe imbali
Abantu bathanda izimbali zizalela imbali ngesikhathi esithile, kufanele izimbali siwabeka ukuze operation, ngokuvamile umcengezi kufanele kwenziwe isitshalo ithule, ekuseni ngesikhathi entwasahlobo ekupheleni kukaFebhuwari ukuze mashi ekuseni, kanye Ngasekuqaleni ka-April, iningi isitshalo umzimba kancane, ngezinye t ...
Okuhle imbiza yisithombo umcengezi wathutha ezitshalweni ngasiphi isikhathi?
Qingdao Bo nje zitshala et fitow umkhakha & trade co., LTD., I-transplanting ekuseni, kafushane wilting kuyinto evamile. Ikakhulu ngenxa zitshala uhlelo impande ucishe zizothinteka iphuzu, ngemva zitshala, ake epholile, umoya izithombo kancane ezinsukwini ezimbalwa ca ...
Eziningana Kuhle Nursery Izitshalo
Nakuba zikhona izitshalo eziningi oluhlaza zingahlanza emoyeni, susa ngempumelelo umphumela ukungcola zasendlini, kodwa entsha ubuciko izindlu ngu amakhemikhali angcolise, Aloe vera, bracketplant, izitshalo sansevieria ingenye ephumelela kunazo izithako zemvelo. ososayensi be-NASA nonyaka angaphezu kuka-20 ...
Okwakushiwo zonke izinhlobo izimbali
Tulip uthando izono, nodumo, isibusiso, Tulip okuphakade (Purple) uthando engapheli, abathanda Tulip (omhlophe) elingenacala, Tulip okumsulwa (pink) ubuhle, uthando, injabulo Tulip (Red) Uthando izono, injabulo Tulip (ophuzi) ezihloniphekayo, umcebo, ingcebo lily bushelelezi, zonke izifiso zigcwaliseka, nibusisa Perfume okumsulwa lily, ecebile, lomshado ...